I-china Hot melt tape tape yabakhiqizi bezingubo zangaphansi ezingenamthungo nabaphakeli | I-H & H.
Ububanzi / m / 1.52m njengoba egcizelele
Indawo yokuncibilika 78-140 ℃
Isikebhe sokusebenza umshini wokucindezela ukushisa: 1 70-180 ℃ 15-25s 0.4Mpa
Lo mkhiqizo ungowesistimu ye-TPU. Kuyimodeli eyenziwe iminyaka eminingi ukuhlangabezana nesicelo sekhasimende sokuqina kanye nezici zokuqinisekisa amanzi. Ekugcineni iya esimweni sokuvuthwa. efanelekile ezindaweni ezihlanganisiwe zezingubo zangaphansi ezingenamthungo, amabhuleki, amasokisi nezindwangu ezinwebeka ngezinto ezinwebekayo nezingaqinisa amanzi. Ukusetshenziswa kwezingubo zangaphansi ezingenamthungo, kusetshenziswa ngokuvuthwa ekubekweni uphawu kwe-hum nokhalweni. 8mm, 10mm, 12mm, 15mm ububanzi obujwayelekile abantu abavame ukubusebenzisa. Imvamisa sikhiqiza imiqulu yehlathi yobubanzi obungu-1.52m, bese sisika njengamakhasimende adinga ububanzi.
1.Umuzwa wesandla othambile: lapho ufakwa ezingutsheni, umkhiqizo uzoba nokugqoka okuthambile nokunethezeka.
2.Imithi yokuwasha amanzi: uma usesimweni esishisayo sokuwasha isimo sezulu, ngeke yephulwe futhi ihlale iyizici zayo. Ingathwala ngaphezulu kokuphindwe ka-15 ama-40 washing ukuwashwa kwamanzi.
5. Isici se-elastic: Lo mkhiqizo usebenza kahle ngendwangu kakotini-spandex.
Ifilimu le-LQ361T Hot melt adhesive lisetshenziswa kakhulu ezingutsheni zangaphansi ezingenamthungo nezinye izingubo ezingenamthungo ezithandwa ngamakhasimende ngenxa yomuzwa wazo wokuthamba nokukhululeka wokugqoka noma ukwazisa ngobuhle. Futhi kuyinkambiso ngokuzayo ukuthi ukusebenzisa ifilimu elincibilikayo lokunamathisela okushisayo ngophawu lokuthungwa esikhundleni sendwangu yokuthunga yendabuko.Kuma-panties angenamthungo, umkhiqizo wethu usetshenziswa kakhulu ekuthungeni amaphenti. Okhalweni, futhi sineteyipu ye-spandex ehambisanayo yokuqhubeka nokulingana. Ngenxa yobubanzi bayo bokuncibilika kanye nokushisa okusebenzayo, le tepi enwebeka eshisayo enamathelayo yenza umkhiqizo wokugcina ube nokumelana kangcono namazinga okushisa, futhi umsebenzisi ngeke alimaze noma enze i-glue incibilike lapho igezwa ngamanzi ashisayo. Lesi isicelo esiyinhloko salo mkhiqizo.
I-LQ361T ifilimu yokunamathela eshisayo eshisayo, ngenxa yokuqina kwayo kanye nephuzu lokuncibilika okuphezulu, nayo ingasetshenziswa kweminye imikhiqizo enjengamasokisi angenamthungo, amasudi e-yoga nezinye izingubo ezinwebekayo.Abasebenzi basebenzisa umshini weglue ukufaka i-glue. Ukusebenza kahle kuyashesha kakhulu futhi nomphumela weglue muhle.Umsebenzi wephepha lokukhishwa ukuthola indawo engenza inqubo ibe lula. Uma kuqhathaniswa nobuchwepheshe bendabuko, izinzuzo zalo mkhiqizo zisobala kakhulu.
Langaphambilini Ifilimu le-TPU Hot melt Hot lezingubo zangaphandle
Olandelayo: Ifilimu le-EVA Hot lincibilikisa izicathulo